Ny taratasy misokatra dia miantso ny zon'ny vondrom-piarahamonina hapetraka ao am-pon'ny drafitry ny Firenena Mikambana hiarovana ny 30% amin'ny planeta - Blue Ventures
Telefaonina: Annie Tourette – Whatsapp: +1 9294543474
Loharano sary: ​​Garth Cripps/Blue Ventures
#30×30 #RightsIndigenous #COP15 #DecoloniseConservation
UN fihaonana tany Genève momba ny zava-manan'aina dia manome fahafahana lehibe hanamafisana ny zon'olombelona amin'ny tanjona fiarovana ny zavamananaina.
Taratasy misokatra ho an'ny mpanapa-kevitra miantso ny Firenena Mikambana 30 amin'ny tanjona 30 hampiditra ny zo ho an'ny Vazimba teratany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ary drafitra iray hiarovana ny zavamananaina ao amin'ny 70% amin'ny planeta tsy voarakotry ny 30 amin'ny 30.
Ny vazimba teratany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana dia mpiaro ny zavaboahary eo anoloana nefa mety ho very ny fidirana amin'ny taniny sy ny rano fanjonoana raha tsy ekena mazava ny zon'izy ireo amin'ny tanjon'ny Firenena Mikambana.
Fikambanana 70 mahery avy amin’ny firenena 30 no nanao sonia an taratasy misokatra izay miantso ireo mpitondra eran-tany mba hametraka ny zon'olombelona ho eo anoloana sy ho ivon'ny tanjona amin'ny fiarovana ny zavamananaina maneran-tany.
Holaniana mandritra ny fivoriana faha-2020 an'ny Fihaonamben'ny Antoko amin'ny Fifanarahana momba ny Fahasamihafana Biolojika any Chine ny Post-15 Global Biodiversity Framework amin'ny faran'ity taona ity. Ao anatin'ny fizotran'ny fifampiraharahana, hivory any Genève ny governemanta amin'ny faran'ny volana martsa mba hampandrosoana ny fampandrosoana ny Framework. Hiresaka momba ny tanjona maneran-tany hiarovana ny 30% ny tany sy ny ranomasina amin’ny taona 2030 ireo solontena.
Ny tanjona 30 amin'ny 30 dia fahafahana tsy manam-paharoa hampitsaharana ny fahaverezan'ny zavamananaina, hiarovana ny zon'olombelona ary hametraka ny planeta eo amin'ny lalana mankany amin'ny faharetana. Tsy hahomby anefa izany raha toa ka manantitrantitra ny maha zava-dehibe ny zon’olombelona, ​​ary mametraka ny fiaraha-monina ho loha laharana.
Ny fivoriana amin'ity volana ity no fotoana farany hanasongadinana ny maha zava-dehibe ny fitovian'ny 30 amin'ny 30 ho an'ny solontena. Ny mpanao sonia ny taratasy dia miantso ny 30 amin'ny 30 izay hampiharina miaraka amin'ny fanekena, fandraisana anjara ary fitarihana maimaimpoana ny Vazimba sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Raha tsy misy fiarovana sahaza, vondrom-piarahamonina maro no atahorana ho very ny zony hihaza, hiompy, hanjono, ary hipetraka any amin'ny faritra voaaro amin'ny fahamaikana hanatratra ny tanjona fiarovana maneran-tany. Ny sasany dia miatrika fahaverezan'ny fivelomana ary na dia trano aza raha tsy manaiky sy manaja ny zony ny rafitra 30 amin'ny 30. Ny vondrom-piarahamonina teratany no fiarovana tsara indrindra amin'ny fitrandrahana ara-barotra tsy maharitra ny zavaboary, ary ho very ny fahalalany manan-danja momba ny tany sy ny rano raha afindra toerana an-keriny izy ireo.
Ny fianakavian’ny mpanjono ao Antsaregy, Madagasikara, dia mandao ny tanànany mba hitoby ao anaty ala honko, ary mijanona ao mba hanjono mandritra ny folo andro eo ho eo. Ny rafitra 30×30 dia afaka mahita ny fidirana amin'ireo toeram-panjonoana ireo voarara na voarara tanteraka mihitsy aza. Loharano sary: ​​Garth Cripps
Ireo mpanjono Vezo nentim-paharazana eto Madagasikara dia mifindra monina eny anelanelan'ny toeram-panjonoana manamorona ny morontsiraka lakandranon'i Mozambika. Ny fandraisana anjara amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo amin'ny fitantanana ny jono dia zava-dehibe amin'ny fiarovana ny zavamananaina an-dranomasina, ny fivelomana eo an-toerana, ny fanjarian-tsakafo ary ny kolontsaina. Loharano sary: ​​Garth Cripps
Annie Tourette, lehiben'ny Advocacy ao amin'ny Blue Ventures dia nilaza hoe:
"Ny fomba tsara indrindra hiarovana ny zavaboary dia ny fiarovana ny zon'olombelona izay monina eo aminy sy miankina amin'izany. Mila ekena mazava sy arovana ny zon'izy ireo. Miantso ny governemanta izahay mba hametraka ny vazimba teratany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ho ivon'ny hetsika fikajiana, ary hiatrika ireo antony lehibe mahatonga ny fahaverezan'ny zavamananaina."
Hermany Manahadraza, Filohan’ny tambajotran’ny vondrom-piarahamonina misahana ny fiarovana an-dranomasina, hoy ny filohan’ny tambajotran’i Madagasikara:
"Ny 30 amin'ny 30 dia manatevin-daharana ny lisitry ny antso ho amin'ny hetsika ataon'ireo mpiaro ny tontolo iainana mba hamonjena ny planeta. Manampy ny feoko ho an'ny fianakaviam-ben'ny vazimba teratany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana aho amin'ny fampahatsiahivana an'izao tontolo izao fa mbola manana fotoana farany hanavotra ny zavamananaina misy antsika isika. Miaraka isika ary hiara-hiasa amin'ny vokatry ny krizy raha tsy manaja ny filan'ny vondrom-piarahamonina ny drafitra ataontsika.
30 × 30, Zon'ny fiarahamonina, Zon'ny teratany, Taratasy misokatra, Valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety